Kutanga unboxing yeiyo nyowani Apple Watch Series 6 | Ndinobva mac
Kutanga unboxing yeiyo nyowani Apple Watch Series 6
Mharidzo yacho yaive Chipiri chapfuura uye nhasi tatova neyekutanga unboxing uye yekutanga kuratidzwa kwevamwe veYouTubers vanozivikanwa zvakanyanya maererano nerudzi urwu rwezviri mukati. Ehe, Marques uye iJustine vanga vari pakati pekutanga kuvhura mavhidhiyo eiyo nyowani Apple Watch Series 6 uye Apple Watch SE. Mupfungwa iyi, ndine chokwadi chekuti zvishoma nezvishoma ongororo dziri kuuya kunetiweki, asi vaviri ava vanogara vachiita basa rakanaka kwazvo uye pamusoro pezvose, kuvaraidza.
Pano tinosiya vhidhiyo new Apple wachi yakaitwa neyakakura Marques Brownlee, maanotiratidza iyo modhi yakatsvuka neiyo itsva yakarukwa Solo Loop tambo. Pasina mubvunzo iro dzvuku rakashamisa asi rinoramba richionekwa kuti rinodzivisa sei kufamba kwenguva sezvo iri rakapenya ruvara uye iro rinogona kuita kukwenya nemabhonzo kuratidza chimwe chinhu pairi. Heano maitiro avo:
Kune rumwe rutivi Ini handina kukwanisa kupotsa iJustine musangano. Anotiratidza maviri mamodheru: iyo Series 6 mune iyo inoshamisa bhuruu bhuru uye iyo SE, pamwe nematanho akati wandei. Handifunge kuti inoda imwe mharidzo saka ngatione ongororo iyo zvakare inofanidza zviyero muyero yekuzadza oxygen:
Zvinotaridza kuti idzi nyowani dzeApple Watch Series 6 ndedzekuda kwako uye dzinoratidza zvakanaka asi nezvimwe zvisina kunaka emaawachi matsva kubva kukambani yeCupertino, zvine musoro kuti zvinewo. Semuenzaniso dingindira re usawedzera cheja yemadziro inoita kunge isingadiwe nemunhu wese kunyangwe hazvo maererano neApple zvinoitwa kutora zvirinani kutarisira pasi ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Kutanga unboxing yeiyo nyowani Apple Watch Series 6
Apple inoburitsa beta 7 yevagadziri veMacOS Big Sur
Excel keyboard mapfupi ekumisikidza maseru uye kushanda nemafomula